DEG DEG:Madaxweynihii Puntland oo xilka laga qaadayo & Xaalada Garoowe oo maanta kacsan + Beesha Ciise Maxamuud oo……. – Puntland News.net
Home 2018 January 13 Puntland News, Somali News DEG DEG:Madaxweynihii Puntland oo xilka laga qaadayo & Xaalada Garoowe oo maanta kacsan + Beesha Ciise Maxamuud oo…….
DEG DEG:Madaxweynihii Puntland oo xilka laga qaadayo & Xaalada Garoowe oo maanta kacsan + Beesha Ciise Maxamuud oo…….
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in gudaha magaalada Garoowe uu ka socdo olole culus oo lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweynihii hore ee Puntland.
Dr. C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole oo haatan ah mudane ka tirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka dalka Soomaaliya oo maalmo ka hor ku qabtay magaalada Garoowe ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas, isagoona sidoo kale meel uga dhacay nidaamka dowladda Puntland oo uu qaranimada Puntland kasoo horjeestay.
Dr. Faroole ayaa sheegay in Somaliland aysan gacan siinin Al-shabaab isla markaasna duuleedka aysan ku khaldanayn, waxaana uu dhanka kale eedayn culus uga tuuray madaxweyne Gaas oo uu ku tilmaamay in muddo kordhin cusub uu ka damacsan yahay dagaalka Tukaraq ee gobolka Sool.
Odayaasha dhaqanka Beesha Ciise Maxamuud oo kulan deg deg ah ka yeeshay aflagaadadii Mr. Faroole ayaa soo jeediyey in Faroole uu raali galin siiyo shacabka iyo madaxweynaha dowladda Puntland, isagoona arintaasi ka biya diiday la iskuna raacayn in xilka Xildhibaanimo ee Aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya laga qaado.
Dr. C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole madaxweynihii hore ee Puntland ayaa isagu xiligani laga gudbiyey dacwad ka dhan ah taas oo dowladda federaalka Soomaaliya looga sheegay in Beesha Ciise Maxamuud ay dib uga fiirsan doonto xilka uu u hayo Beesha isla markaasna ay dhawaan keeni doonto Beeshu qof lagu badalo.
Mr. Faroole ayaa wakhtigani xaalad jaah wareersan ku jira, waxaana aan la ogeyn waxa uu ka yeeli doono go’aanka Beeshiisa.
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net – Gaalkacyo